List of Supported Labors (Doe Lote Thar program) - The Fifth Pillar
July 1, 2020 July 1, 2020 editor editor	0 Comments
Emergency Support for Labors program (Doe Lote Thar) has provided in total 72 women 10,368,000 MMK ($7,558.272) so far. The rest of applications is being checked and the new applications will be paused forawhile on 8 of June 2020. After checking and providing all the previous applicants, the next new applications will be re-accepted.
The program announcement and up to date information will be available at this website and The Fifth Pillar Facebook Page https://www.facebook.com/TheFifthPillar.tfp . The list of provided applicants can be found on tables below.
“ဒို့လုပ်သား” အရေးပေါ် ပံ့ပိုးငွေ ပေးအပ်ပြီးသည့် စာရင်း”
“ဒို့လုပ်သား” အစီစဉ်မှ Covid-19 ကြောင့် အလုပ်ထုတ်ခံလိုက်ရသည့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ၊ အရေးပေါ် နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသမီးများကို တစ်ဦးလျှင် ကျပ် ၁၄၄,၀၀၀ (တစ်ကြီမ်သာ) ပံ့ပိုးပေးနေပါသည်။
“ဒို့လုပ်သား” အစီအစဉ်ကို (17.5.2020) ရက်နေ့တွင် စတင်ခဲ့ပြီး လျှောက်ထားလွှာ အများအပြားကို လက်ခံရရှိထားပါသည်။ ထို လျှောက်ထားသူများထဲမှ လက်ရှိချိန်ထိ အမျိုးသမီး (၇၂) ဦးကို ပံ့ပိုးငွေ ပေးအပ်ပြီးဖြစ်ကာ စုစုပေါင်း ပံ့ပိုငွေကျပ် 10,368,000 (တစ်ရာ့သုံးသိန်းခြောက်သောင်းရှစ်ထောင်ကျပ်) ရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ (72 x 144,000 = 10,368,000)
ကျန်ရှိနေသည့် လျှောက်ထားလွှာများကို စာရင်းသွင်းခြင်း၊ စီစစ်ခြင်းများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် “ဒို့လုပ်သား” ပံ့ပိုးငွေလျှောက်လွှာ လက်ခံခြင်းကို (8.6.2020) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ခေတ္တရပ်နားထားခဲ့ပြီး လက်ရှိလျှောက်ထားပြီးဖြစ်သည့် လျှောက်လွှာများကို စီစစ်ထောက်ပံ့ပြီးမှသာလျှင် လျှောက်လွှာအသစ်များကို ပြန်လည်လက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်…
ပြန်လည်လက်ခံမည့် နေ့ရက်ကို ထပ်မံအသိပေးကြေညာသွားမည်ဖြစ်ပါသည့်အတွက် ယခု ဝက်ပ်ဆိုက်နှင့် The Fifth Pillar Facebook Page https://www.facebook.com/TheFifthPillar.tfp ကို Like လုပ်ထားရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
ယခုအစီအစဉ်ကို The Fifth Pillar နှင့် Fair Wear Foundation တို့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပြီး Red Carpet Green Dress မှ ရန်ပံ့ငွေ ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။COVID ကာလအတွင်း ဘေးအန္တာရယ်ကင်းရှင်းပြီး၊ ကျန်းမာ အဆင်ပြေကြပါစေကြောင်း ဆန္ဒပြုအပ်ပါသည်…(23.6.2020)#DoeLoteThar#RCGD#FairWear#TheFifthPillar
← Legal Education on anti-human trafficking Book
Contribution Masks →